Extract Engamakhambi, Animal extract, okokunandisa, Plant extract Oil - Tong Rui Bio-Tech
Gxila Futhi Professional, Yenza Ngibambeni Better!
INanjing Tong Rui Bio-Tech Co., Ltd. ebizwa ngeTRB, ibigxile ezikhishweni zemvelo iminyaka eyi-18, i-TRB yinkampani esekwe kubuchwepheshe ehlanganisa i-R & D, ukukhiqizwa kanye nokuthengiswa kwemakethe yamazwe omhlaba. Imikhiqizo ye-TRB ifaka izinto ezikhishwe ezitshalweni, okukhishwa ezilwaneni, okokunandisa, ama-nootropics, ujusi wezithelo kanye ne-powders yemifino, amafutha abalulekile nezithako zokudla. I-TRB njengamanje inezimboni ezimbili, enye iyifekthri emsulwa yemifino yemvelo, enye ifektri yomkhiqizo wezinyosi, futhi sinezichungechunge zezitifiketi ezifana ne-ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Imingcele ngesayensi nobuchwepheshe
Singabantu njalo iyahola isayensi nobuchwepheshe, bahlanganyele ezifuywayo international izingqungquthela zezemfundo umkhakha ubuchwepheshe zingxoxo zenza, kanye kwakha amazinga akhiphe yemvelo efanele. Sithuthukise anti-namachibi, izithako aphrodisiac, okokunandisa futhi nootropics. Imikhiqizo yethu hot-abathengisayo isayensi nobuchwepheshe emingceleni emakethe.
Top R & D khono
Sihlangene phezulu R & D amaqembu kanye nempahla e-China. Ngesikhathi esifanayo, siye sathola kokubonisana lobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezivela ezikhungweni ezifanele European futhi American. Sine siqu laboratories zethu ezimele, ithuthukiswe izithako ngempumelelo asebenzayo ezikhishwe zemvelo ahlobene, futhi wasungula ngokujulile ucwaningo Uchungechunge nemikhiqizo kanye monomers.
engu-18 ukuthekelisa isipiliyoni, ezingaphezu kuka-200 imikhiqizo chungechunge, izinkulungwane imikhuba ngamazwe zokuthutha, emazweni angaphezu kuka-40 'ukuhweba isipiliyoni, ujwayelene neziqondiso ezifanele zikazwelonke, ukuhlinzeka amakhasimende imikhiqizo zethu eziwumongo bese imikhiqizo hot. Ngesikhathi esifanayo, siye ukuhlangabezana nezidingo neminye imikhiqizo ukuhweba amakhasimende ethu futhi ahlinzeke sokuma izixazululo imikhiqizo yezempilo-Chinese.
Ubhadane lube nomthelela obanzi ...
Amathegi ahlobene: impilo yenhliziyo, chro ...
Izihlahla, izidalwa ezivame ukuzungezile ...
Muva nje, umbiko wedatha wakamuva ukhishwe ...